सारै कडा ! Dear श्रीमान एकपटक अबश्य पढ्नुहोस – Enepali Samchar
December 7, 2020 December 7, 2020 adminLeaveaComment on सारै कडा ! Dear श्रीमान एकपटक अबश्य पढ्नुहोस
काठमान्डौ। तपाइँलाई मेरो लागि जु’नतारा टि’पेर ल्याइदिनु भन्दिन ,तर जब बाहिरबाट घर आउनुहुन्छ, साथमा एक मुस्कान लिएर आउनुहोस् । म भन्दिन, कि सबैभन्दा बढी मा’या मलाई नै गर्नुहोस् ,तर एक नजर मायाले त हेर्नुहोस म भन्दिन , कि बाहिर खुवाउन लिएर जा’नुहोस् तर एकपटक साथमा सँगै बसेर त खाने गर्नुहोस्।
भन्दिन कि मलाई काम गर्नमा सघा’उनुहोस् ,तर कति काम गर्छु, हेर्ने त गर्नुहोस् । भन्दिन म मेरो हात पक्डिएर हिड्नुहोस् ,तर कहिले दुई कदम साथ त हिड्ने गर्नुहोस् … ।यसरी नै बित्नेभयो जिन्दगिको यात्रा भाग्दा भाग्दै ,एकछिन थकाई मार्न त बस्ने गर्नुहोस् ।
भन्दिन कि मलाई अनेकौ नामले बोलाउनुहोस् ,।एक पटक फुर्सदमा “सुन”… मात्र भ’एपनि त भन्ने गर्नुहोस् …। भन्दिन तपाइँलाई जुन-तारा टिपेर ल्याइदिनुस तर जब घर आउनुहुन्छ एक मुस्कान साथमा ल्याउने गर्नुहोस् ।आखिर श्रीमानको लागि श्रीमती किन आवश्यक छ? ( बिश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् )
१, जब तपाईं दुखी हुनुहुन्छ त्य’सबेला उनले तपाइँलाई कहिल्यै एक्लो छाड्ने छैनन् ।२, हरेक समय, हरेक दिन तपाइँलाई तपाईं भित्रको खराब बानी छोड्नको लागि भन्नेछिन।३, हरेक सानो-सानो कुरामा तपाईं सँग झगडा गर्छिन तरपनी धेरै समयसम्म रिसाएर बस्दिनन ।
४, तपाइँलाई आर्थिक मज’बुत बनाउछिन ।५, जिबनमा केहिपनी राम्रो चलिराको छैन , तर पनि तपाइँलाई यही भन्छिन चिन्ता नगर्नुस् सब ठिक हुन्छ ।६, तपाइँलाई समयको महत्त्व बुझाउने छिन ।७, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि दिनमा १५ पटक फ़ोन गरेर हालखबर सोध्छिन । कहिलेकाही तपाईं रिसाउनुहुन्छ , तर सत्य यो हो कि तपाईं केहि गर्न स’क्नुहुन्न
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका यी साना साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती ! पुरुषले अबस्य हेर्नुहोस् ।
OMG : नेपालमा कोरोना महामारी भयावह बन्दै ,आज एकै दिन थपियो यति धेरै कोरिना संक्रमित !